Vaovao - Fandefasana vaovao ho an'ny Coil Galvanized ASTMA 653
Fampandrenesana fampandrenesana ho an'ny Coil Galvanized ASTMA 653
Ny ravina vita amin'ny firaka zinc na metaly zinc-vy ao anaty coil ary ny halavany voadidy dia novokarina ho takiana amin'ny hatevin'ny 0,001 in. [0,01 mm]. Ny hatevin'ny ravina dia misy roa
ny vy metaly sy ny sarony.
Ny baiko momba ny famaritana an'ity famaritana ity dia ahitana ireto fampahalalana manaraka ireto, raha ilaina, mba hamaritana tsara ny vokatra tadiavina:
1 Anaran'ny vokatra (ravina vy, rakotra zinc (nandrisika) na firaka vy-metaly (nandrisika)),
2 Fametrahana takelaka [CS (Karazana A, B, ary C), FS (Karazana A sy B), DDS (Karazana A sy C), EDDS, SS, HSLAS, HSLAS-F, SHS, na BHS].
3 Rehefa voatondro ny fanondroana SS, HSLAS, HSLAS-F, SHS, na BHS dia lazao ny naoty na ny kilasy na ny fampifangaroana azy.
Nomera fanondroana ASTM 4 sy taona namoahana azy, toy ny A653 ho an'ny singa milimetatra na A653M ho an'ny singa SI.
Fanondroana firakotra 5,
6 Tsaboina simika na tsy simika simika,
7 Misy menaka na tsy misy menaka,
Sponjy 8 kely (raha ilaina),
9 Malalaka kokoa (raha ilaina),
10 Phosphatized (raha ilaina),
11 refy (asehoy ny hateviny, farafahakeliny na nominal, sakan'ny, fitakiana fisaka, ary ny halavany, (raha halava nohetezana)).
Fepetra takiana amin'ny coil 12 (farito ny savaivony ivelany farany ambany (OD), ny savaivony anatiny (ID), ary ny lanjany [lanjany] lehibe indrindra),
14 fanamarinana, raha ilaina, fanadihadiana momba ny hafanana sy ny fananana mekanika,
Fampiharana (famaritana sy famaritana ampahany), ary
Fepetra manokana 16 (raha misy).
16.1 Raha ilaina dia azo baverina amin'ny hatevin'ny vy fototra ny vokatra
16.2 Raha ilaina izany, ny vokatra dia azo alefa amin'ny toerana voafaritra voafaritra / iray sosona
16.3 Rehefa mila fandeferana matevina amin'ny 3⁄8-in ny mpividy. [10-mm] elanelam-potoana farany ambany farafahakeliny ity takiana ity dia ho voalaza ao amin'ny kaomandy fividianana na ny fifanarahana.
FANAMARIHANA 1 — Ny famaritana famandrihana mahazatra dia toy izao: takelaka vy, mifono zinc, vy vy varotra Type A, ASTM A653, Coating Designation G115, voatsabo simika, menaka, 0,040 farafahakeliny 34 hatramin'ny 34 in. , metaly mifono zinc, vy mahery alim-bokatra ambany grade 340, ASTM A653M, Coating Designation Z275, sponjy mihena, tsy voatsabo simika, voahosotra, kely indrindra 1,00 amin'ny 920 mm amin'ny coil, 1520-mm maximum OD, ID 600-mm, 10 000 -kg faran'izay betsaka, ho an'ny tratra anatiny traktera.
NAOTY 2 — Tokony ho fantatry ny mpividy fa misy ny fiovaovan'ny fomba amam-panamboarana eo amin'ireo mpamokatra ary noho izany dia nanoroana hevitra izy ireo mba hametraka ny fomba fanao mahazatra (na tsy fanao) an'ny mpamokatra amin'ny fandeferana amin'ny hateviny.
Fotoana fandefasana: Apr-09-2021